Gipsy Vanner, oo ah faraska ugu xiisaha badan carruurta | Fardaha Noti
El gipsy vanner faras Waxay ku leedahay asal ahaan koox jimicsi ah oo kor u qaaday faras noocan ah markii ugu horeysay ee waddooyinka loo yaqaan Vardos. Waqtigaan la joogo, waa faras adeegsigiisa ugu badan uu yahay xirashada sida xayawaanka xayawaanka ah ee loogu talagalay carruurta.
Gipsy Vanner waxaa laga soo dhoofiyay Mareykanka qiyaastii 1966. Iyaga oo jira, haddana ma aysan aheyn ilaa 2004 markii loo tixgeliyay inay tahay nooc oo laga diiwaangeliyey Xiriirka Dharka Dhammaan Barnaamijka Taranka. Waa faras adeegsigiisa ugu badan yahay labis, fardooley guud iyo shaqo.
Waxay isu rogtaa nooc faras aad u soo jiidasho badan, muuqaal muuqaaleed leh iyo tallaabo kalsooni leh meel kasta oo ay tagto. Mahadsanid adiga dabeecad hoose iyo midnimo badan waxay awood u yeelatay in loo soo saaro ujeedooyin badan Yurub oo dhan.
Wuu gaari karaa cabir dhererkiisu yahay 1,63 mitir, xitaa waxaa jiray kiisas dhan 1,65 mitir. Si kastaba ha noqotee, culeyskiisu waa qiyaastii 630-635 kg, iyadoo kuxiran nooca cuntada iyo howlaha uu qabanayo. Dhogorteeda waxaa loo aqoonsan yahay quruxda weyn ee ay ka muuqato midabbada madow iyo caddaan, iyada oo ka mid ah kuwa ugu caansan adduunka.
Marka laga hadlayo astaamaheeda jireed, Gipsy Vanner waa nooc loo yaqaan 'equine' oo leh laab balaaran iyo gadaal wareegsan oo ay weheliso dhabarka oo sida muuqata u gaaban. Koofiyadaha ay wataan marka ugu horeysa waxay u muuqdaan weynaantooda iyo dhogorta ku hareeraysan. Qoortiisu muuqaal ahaan way xoog badan tahay madaxiisa dhuubanna waa lagu taageeray. Jaleecad ahaan waxaan ka arki karnaa taada man iyo dabo aad bay u dheer yihiin oo socdaan, tanna waa inaan ku darnaa timaheeda toosan oo xiiqsan. Wuxuu leeyahay garbihiisa xooggiisa iyo miskaha culus.
Marka laga hadlayo dabeecaddiisa, waa inaan sheegaa in ugu badnaan loo tixgelin karo celcelis ahaan. Waa mid ka mid ah kuwa ugu caqliga badan uguna miisaanka roon dhammaan noocyada, saaxiibtinimada, isboortiga, xoog iyo wax walba ka sarreeya, waa faras dabacsan, mid aad u bulsheed aadna u sahlan in saaxiib la yeesho.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » kuwa kale » Fardaha fardaha » Gipsy Vanner, waa faraska ugu xiisaha badan carruurta
Faraska Fjord ee Norwey
Faraska sidoo kale wuxuu qabtaa hargab